Iinkonzo zethu -. Rainbow Star ent, Co., Ltd.
Nail Tips Artificial
UMNYHADALA nail TIPS
Umsusi ZODLUDLISELO ART ngefoyile ye
ZIIKITHI nail ART
Istensile nail sticker
Eyongezwayo nail ART
CARE ART nail buffer endaweni yokuyidibanisa
Umsusi sokunyathela ART ipleyiti
Nail Art Stamper & ize
Nail ART Stainless Pusher
Kwenwele Tattoo sticker
UMXHOLO zebhola sticker
brand yakho, ephambili yethu
Rainbow Star Enterprise Co., Ltd.understood kubaluleke umgangatho kunye nokuzinza imveliso kumfanekiso wakho nophawu kunye nophawu. Ifilosofi yethu ukugxila kumaxabiso zakho brand yaye ekugqibeleni kumava ekupheleni lomsebenzisi igama lakho.
Singabantu Hong Kong -Chinese joint venture ejoliswe lokudibanisa iingenelo ukhuphiswano kwiindawo ezimbini kunye, kwiklasi yokuqala izinto neteknoloji kunye neendleko zemveliso kukhuphiswano. iimveliso zethu zakhiwa China kodwa ulawulo ukusebenzisa ulwazi, ubugcisa, izixhobo kunye nezinto zokwenza imveliso evela Hong Kong.
Kunyanzelekile ukuba ngalinye imveliso eshiya umgca yethu imveliso ugqibelele. Ukususela kanye ukhetho kumalungu imichiza kunye nendlela ilungiselelwe ngendlela iimveliso zethu zinika iinkonzo izisombululo ukuze kuqinisekiswe uzinzo imveliso athunyelwe kuwe.
Iqela lethu lentengiso ngokuqhubekayo sisebenzela ukufumana iindlela ezintsha kwaye ziphuhlise imveliso entsha ezithandwayo kunye oluzinzileyo. Ukusebenza ngokubambisana kunye nawe, singakwazi ukuqalisa egameni lakho uze uncede ugcine igama lakho phambili.
Nokuba brand kunye nemveliso yakho uyilo okanye iinkcukacha bakulungele 100% kunye ekhoyo okanye akunjalo, nako ukwenza inkonzo yethu nemveliso uza kumelana neemfuno zakho ngqo thina.
Nge R lethu ngamandla kakhulu & amaqela Management D kunye Brand siceba ukubonelela kuwe kunye isisombululo ngokupheleleyo ngokwemigqaliselo okanye ngexesha zombini kunye neendleko kwaye ekugqibeleni ngemveliso yobungcali ngokubhekiselele kwimbono uhlobo kunye nomgangatho. Ezingeyomfuneko namhlanje, Rainbow Star Enterprise Co., Ltd. Sisebenzela 100% yomthengi nokwaneliseka ekupheleni-umsebenzisi.
Thina iceba ukhetho elikhulu imibala, iziphumo neepakethe, ngenxa yokusondela mveliso wethu, siyakwazi ukuhlangabezana izicelo zomxhasi wethu ngokulula (OEM), kwakwenziwa isicelo soko lomthengi kaThixo, Rainbow Star inawo amandla ekuphuhliseni iimveliso ezikumgangatho ophezulu ezifana ifomula eliphezulu, umbala ofanayo, uphuhliso umbala kunye nokwenziwa (ODM).
iimveliso zethu kunye sopakisho esisetyenziswa zikhutshwa isicelo iimeko engqongqo azinantsholongwane kwaye Kambe ke, indawo yethu iye yaluphumelela GMPC umasifundisane ulawulo standardised le comfiguration kwezixhobo ngamazwe ephambili Cosmetic imveliso kunye imigca yokusebenza standardised kunye nenkqubo yolawulo kubekwa.
GMPC imithetho isiqinisekiso uqinisekisa mfuno zisezantsi iindlela, amaziko kunye nolawulo ezisetyenziswa imveliso, ingonakali, nokufakwa kwimveliso izithambiso. Le mimiselo jikelele ukuqinisekisa ukhuseleko lwemveliso yethu kunye nokungafihlisi malunga izithako kunye namandla sibanga ukuba.
PLATFORM SERVICE OGQIBELELEYO
Sisekela ukunika abathengi inkonzo ngokufudumeleyo olucingisiswe, i iqondo eliphezulu yomthengi kunye noxanduva lwentlalo, yaye olu xanduva akukho nje kokuhlala ngolwimi olulula, ukuba ungumlinganiswa onjani na inyathelo, sisoloko balandele ngqo le nkonzo kakhul nezilungileyo nkqubo, ukudala uluhlu olupheleleyo kwinkqubo ngeenkonzo
Xa umgangatho standa ephezulu ...
Bhetyebhetye, umgangatho, amanani kunye elifutshane elikhokelela ixesha zezona zinto impumelelo ezenza Rainbow Star E ...